जुठो खाँदा कोरोना सर्छ कि सर्दैन ? के भन्छन् विज्ञहरू – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/जुठो खाँदा कोरोना सर्छ कि सर्दैन ? के भन्छन् विज्ञहरू
जुठो खाँदा कोरोना सर्छ कि सर्दैन ? के भन्छन् विज्ञहरू
काठमाडौं : गत डिसेम्बर महिनामा चीनको युहान शहरबाट पत्ता लागेको कोरोना भाइरस राेग (कोभिड–१९) बारे थुप्रै तथ्यहरु बाहिरिएका छन् । कोभिडबारे विश्वभर अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसका अनेकौं वास्तविकताहरु बाहिर आइसकेका छैनन् । नयाँ नयाँ तथ्यहरु आउने क्रम जारी छ । अहिले यस भाइरसका बारेमा व्यक्ति थता समुदायमा थुप्रै जिज्ञासाहरु रहेका छन् । यसमध्ये एउटा हो संक्रमितको जुठो खानेकुरा खाँदा भाइरस सर्छ कि सर्दैन भन्ने ?
विज्ञहरूले यसबारेमा आ–आफ्ना तर्क अगाडि सार्ने गरेको छन् । जुठो खानाबाट भाइरस सर्छ वा सर्दैन भन्नेबारे कुनै अध्ययनबाट प्रमाणित नभएकाले सर्छ भन्ने आधार नभएको एकखाले तर्क छ । कोरोना भाइरसका हालसम्म पत्ता लागेको तथ्य र विशेषतालाई आधार बनाएर जुठो खानाबाट भाइसर सर्ने सम्भावना रहेको जिकिर पनि विज्ञहरूको छ ।
शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. अनुप बाँस्तोला जुठो खानेकुराबाट भाइसर सर्छ भन्ने तथ्य हालसम्म कहीँबाट प्रमाणित नभएको बताउनुहुन्छ । ‘अहिलेसम्म कुनै अध्ययनले प्रमाणित गरेको छैन, त्यसैले संक्रमितको जुठो खाँदा सर्छ भन्न सकिन्न’ डा. बाँस्तोला भन्नुहुन्छ । बाँस्तोला नेपालमा देखिएको संक्रमणको दोस्रो केस देखि नै कोरोना संकमितको उपचारमा खटिइरहनु भएको छ । जुठो भन्दा पनि बरु सँगै बसेर खाना खाँदा चाँही बिरामीको मुखबाट निस्कने छिटाहरुबाट सर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुने उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. बासुदेव पाण्डेले भने जुठोखाँदा कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना अत्याधिक रहेको बताउनुहुन्छ ।मुख, नाकबाट निस्कने तरल पदार्थबाट नै भाइरस सर्ने देखिएकाले जुठो खानाबाट सर्छ की सर्दैन भन्नेबारे दुविधामा रहनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुखमा रहेका ¥याल, थुकबाटै संक्रमण हुने भएकाले खाना खादा पनि त्यसमा भाइरस मिसिने सम्भना धेरै नै हुन्छ ।’ डा. पाण्डेले भन्नुभयो–‘यसरी संक्रमितको जुठो खाँदा सर्ने सम्भावना स्वत हुने भइहाल्यो।’
संक्रमणको सम्भावनालाई कम गर्न सधैँ सँगै नहरने, एकै परिवारका सदस्य भएपनि बाहिर काम गर्न गएर आउने व्यक्तिको जुठो सकेसम्म नखान डा.पाण्डेले सुझाव दिनुभयो ।
कुनै अध्ययनले यसको पुष्टि नगरेपनि मानिसको शरीर बाहिर पनि भाइरस लामो समयसम्म जीवित रहने अध्ययनले देखाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । खानेकुरा खाने क्रममा मुखका तरल पदार्थ खानामा मिसिने भएकाले संक्रमितको जुठो खाँदा भाइरस सर्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने डा.पाण्डेको तर्क छ ।
थप २ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ हजार ७ सय ९८
खुशीको खबर: नेपालमा कोरोनालाई जितेर घर फर्कनेको सं`ख्या २ सय ७८ पुग्यो !!
टिचिङ्ग अस्पतालमा शल्य`क्रिया गर्न ठिक्क पारेकी ६ बर्षिया बालिकालाई कोरोना देखियो , स्वास्थ्यकर्मी नै त्र`सित !
नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका बिमारी निको हुदै !
अष्ट्रेलियाका बैज्ञानिकले पत्ता लगाए ४८ घण्टामा कोरोना भाइरसका औषधि